Beesha Caalamka oo dalab ku aadan doorashada Galmudug u dirtay dowladda – Hornafrik Media Network
Beesha Caalamka oo dalab ku aadan doorashada Galmudug u dirtay dowladda
Ilo lagu kalsoonaan karo ayaa noo xaqiijiyay in beesha caalamku ay dowladda Soomaaliya ka dalbatay inay goobjoog oo kaliya ka noqoto doorashada ka dhacaysa magaalada Dhuusamareeb ee maamulka Galmudug.
Wararka ayaa intaasi waxay ku darayaan in beesha caalamku ay balan qaaday inay bixin doonaan dhaqaalaha ku baxaya doorashada maamulka Galmudug.
Xubnaha beesha caalamka ee ka hadlay arintaan ayaa dowladda federaalka ka codsaday in doorashada Galmudug aysan noqon tu la mid ah kuwii horay uga dhacay magaalooyinka Baydhabo iyo Kismaayo, sida ay noo sheegeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Galmudug.
Sidoo kale xubnaha beesha caalamka ayaa waxaa ay ku baaqeen in si cadaalad ah ay u dhacdo doorashada Galmudug, isla markaana si xor ah ay aragtidooda u dhiibtaan xubnaha musharixiinta ee u tartamaya xilka madaxtinimada ee maamulka Galmudug.
Boosaaso: Faaf-faahino ka soo baxaya Nabadoon hooygiisa lagu weeraray